नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा न. १० मा एक महिने सिलाई कटाई तालिम सञ्चालन – Radio Hatemalo FM
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा न. १० मा एक महिने सिलाई कटाई तालिम सञ्चालन
प्रकाशित मितिः ९ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०७:५७ March 23, 2018 हातेमालो संवाददाता
नेपालगन्ज-नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा न. १० मा एक महिने सिलाई कटाई तथा व्याग बनाउने तालिम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । वडा न १० वडा समितिको कार्यालयले एकिकृत सामाजिक विकास केन्द्र(आइएसडीसी)को सहजीकरणमा महिलाहरुका लागि तालिम शुरु गरिएको हो ।
स्थानीय बेरोजगार महिलाहरुलाई लक्षित गरेर लक्षित वर्ग कार्यक्रमबाट तालिम सञ्चालनमा ल्याइएको वडा महिला सदस्य बसन्ता जोशीले जानकारी दिए। तालिम उद्घाटन गर्दै वडा न १० का वडा अध्यक्ष विन्दुभुषण बस्नेतले रोजगारीको माध्यम बन्न सक्ने यस्ता तालिमलाई भरपुर सदुपयोग गर्न सहभागिलाई आग्रह गरे। सहजकर्ता संस्था एकिकृत सामाजिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष चीत्र बहादुर केसीले तालिमलाई अवसरका रुपमा अनुशरण गर्न आहवान गर्दै सक्रिय सहभागितामा जोड दिए ।
१० जना महिलाको सहभागिता रहेको तालिममा साडी कडाई, धागो रङ्ग्याउने, झोला बनाउने लगायतका विषयमा सिकाइने प्रशिक्षक कल्पना सुनारले जानकारी दिए । अर्की प्रशिक्षक उमा सुनारका अनुसार दैनिक ६ घन्टाका दरले सहभागिहरुलाई व्यवहारिक कक्षा दिएर स्वयं रोजगार गर्न सक्ने बनाइने छ । कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक विजय मल्लद्धारा सञ्चालित कार्यक्रममा वडा सदस्य नर बहादुर विष्टले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
प्रदेश नम्बर पाँचको राजस्व परामर्श समितिको सदस्यमा लम्साल मनोनयन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको अवस्था के?
नेपालगन्ज-भारतको रेल्बे लाइन विस्तार गर्न पहिलो चरणको सर्भेको काम पूरा